Imizuzwana engama-37.5 yokumanga kwakho kokugqibela-iGeofumadas
Epreli, 2010 egeomates My, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Ukuthi hayi kuwe bekuya kuba lula kunokuva usitsho. Kubuhlungu kakhulu apha entliziyweni, hayi ukuba bendingayilindelanga, hayi ngoku, mhlawumbi ngekhe.
Kungenxa yoko le nto ndikucela oku kokugqibela. Kungekudala, akufutshane kakhulu. Kuphela kwe- Imizuzwana ye37.5 ukusukela ekunxibelelaneni kwemilebe yam eyomileyo kunye ne-lipstick ekhokelela emlonyeni wakho oyinyama. Ngaphandle kwesingeniso, ngaphezulu kokuwola phantsi kweemeko ezintsha, uthambile, womelele, ukomkhulu, ndide ndikwazi ukuphefumla emva kwendlebe yasekhohlo kunye nokubetha kwakho kwi-sternum yam kucinezelwe yingono yakho yasekunene.
Ngaphandle kokucalula kwinto ebeyiyo, engeyiyo, ubuncinci kunokuba -siyazi- ayiyi kuba. Ukuba ujonge emehlweni am, kunye nokuziva nje kwamabhabhathane, ukuba sikhale ngamathambo ethu ngento eshiyekileyo, esele iseleyo, eyantoni-Ndicinga ukuba-Asoze sazi ukuba siphi.
Ukuba undiboleke imilebe yakho namhlanje, undenzele yona, kwaye uthabathe eyam namhlanje njengebhandeji. Ayomelelanga, ayithambile, akukho lwimi, ayininzi kangako. Ndifuna nje ukuziva umlingo wokuphefumla kwakho unxibelelwano lweekhemikhali-Ndiyazi-eyongcolisa i-lyre yakho yomqolo kwaye iwele ngaphesheya kokuwa kweettledrums zam.
Imizuzwana ye15 ukuba uzive ungaphili Clorets gum, imemori eyayikho ngaphambili, ngaphambi kokuba izinto zilahleke -kwaye uphumelele-. Ukuqinisekisa ukuba ukujonga kwakho kundileqa ngokungalali, uncumo lwakho olunobubele, kunye nokuhleka kwakho kugquma ngathi chiflones, ididekile kunye nokukhala kwabadobi abalahlekileyo, kukho ubumnyama obukhulu, apho Chilika.
Imizuzwana ye15 ukuqinisekisa ukuba akukho mntu unokuthanda -okanye uyeke ukwenza- ubusuku, ukuya emva kwemini, ukuya ebusuku, ukuya kwelandelayo. Ukukulibala phakathi kwemilenze yenye intombazana, ukuncwina kwakho, ukungcwaba kwisangqa sesisu sakhe kwaye ukuvuselele ngokwanga kwemilebe yakhe -oku kumanga-.
Imizuzwana ye7 ukuba ugugile kunye nawe, khumbula ukuba usaphila, kwindawo ethile, kwaye ukhohlwe ukuba awukho nam -kungekho kwindawo yam-, ewe ngexesha lam. Ukuba uyandikhumbula, ukuba uyandilibala, kwii-curls zakho, kunye ne-tint efunwayo ngumzuzu, ngwevu engapheliyo. Ukukuchukumisa kwilitye lesifuba sam, ukuvuselela iinzipho zakho kwimilambo yomqolo wam, kumda wokubetha, nokuba awusekho.
Isiqingatha sesibini ngaloo mini -okanye ebusuku- xa intliziyo ifikela phezulu, kwaye kanye apho, xa igazi lingasondli i-capillaries yam, kunye nemilomo yam iyomile, iyabanda ngenxa yokuba bengasaphila ...
Unokuziva, ukusuka kweli candelo -kunye nezinye-, okokugqibela kunye neyokuqala, uvakalelo olunjalo lokubanga.
Uxolo ngabantwana abatyelele ibhlog. Kwakungenanjongo yokufuna.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Uqikelelo lweNdebe yeHlabathi yoMzantsi Afrika
Post Next GPS Mobile Mapper 6, Capture DataOkulandelayo »
7 Ukuphendula "kwimizuzwana engama-37.5 yokumanga kwakho kokugqibela"
Enkosi uAngela. Ndikufundile nalapho.
Kulungile kakhulu, nje kumnandi.
Imnandi nje ngokwanga ...
ewe ... ngaphantsi kokubi. Ngokuqinisekileyo ezi zinto zenzeka ukusuka apha ukuya kwelinye icala lakwaLempa.
I-Critic engaziwa uthi:
Ndibulela ukulunga yi-blog ye geomatica
haha, ungendawo kangakanani.
Enyanisweni ndanditshintshile ezinye zeziqulatho ukususa udidi R
Ndikhubekile xa ndiyifunda ...